Neocolonialism fi Shira Diinaa Maqaa Qubee Afaan Oromoo Jijjiiruu jedhuun Gadi Bahee ilaalchisuun Dhaamsa Gudunfaa Dubbii. « QEERROO
June 19, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Qabsoo afaanii Goototni Oromoo baroota dheeraa irratti wareegama qaalii kanfaluun uummatichaan gahanii uummaatni Oromoo har’a ilmaan godhaatee dhaloota Qubee miliyoonotaan ittin barsiifatee guddifacha jira. Beektootni hedduun bu’aa wareegamtoota Oromoo kan ta’an dhalootni Qubee omiishamaniiru ilmaan Kanaaf kara adeemtuun ofumaa dhamaati malee itti hin milkooftu.
Akeekni kun kan itti yaaadameef har’a Oromoon qabsoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu fi ofiin of bulchuuf hiriiree falmachaa waan jiruufi diina sadarkaa angoo irraa qaarisuu irra waan gaheef diinni olola afaanfaajjii uumuufi gaaffiin uummata Oromoo fi qabsoon uummata Oromoo dhimma Afaanii irratti hirkisuufi moggaatti ittin dhiibuuf kana butattee kan kaate ta’uun ifaadha. Kanuma waliin kan wal qabateen sabboontoota Oromoo ittin busy gochuuf shira yaadame keessa tokko. Shira kana irra aanuuf Oromoon hojii manee wayyaanee qabsoo jabeessuun wayyaaneetti deebisuutu furmaata. Qabsoon jala dhaabbachuudha, Qubeen Afaan Oromoo bakka hundatti A, B, C , …Z jechuun itti fufuu qaba. Tasuma waan ammaa OPDO wayyaaneen muddama seentee afaaniin sobdee waan kaleessa TVO tti baatee Qubeen Afaan Oromoo jijjiirame (L,A,G,M) jettee erga labsitee deebitee dhiyeenyaa immoo muddama waan seenteef tartiibni Qubee hin jijjiiramne jechaa jirtuuf namni gowwomfamuuf hin jiru. Biiroon Barnoota Oromiyaa ittigaafatama seenaa keessaa hin baane keessa seentee jirti.
Firoonnii Wayyaanee OPDO shira kana haguuguuf biyyaa keessaafi alaa waan qabdanii gadhiiftan dhabaa jirtan afaan keessan Cuqqaallaadha uummata Oromoo irraa gadi taa’a. Uummatni Oromoo dammaqinsa siyaasaa fi Sabboonummaa isin har’a qabna jettan kana bira darbee bilisummaa isaa kabachiifachuuf qabsoo irra jira.
Uummatni Oromoo fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo, goototni barattootni Oromoo, beektootnifi hayyootni Oromoo biyyaa keessa fi iyyaa hambaa jirtaan olola afaan faajjii namootaa muraasaan oliif gadi oofamutti gurraa keessan hin kenniina. Rakkoo waliigalaan keessaa jirruuf furmaatni tokkichi qabsoo FXG bifa dandahamuu hundaan itti jabaachuudha. Qajeelfamoota Sochii warraaqsaa yeroo yeroon haala yeroo irratti hundaa’uun harka lafa jalaan dabarfamu irratti hundaa’uun qabsoo finiinsuutti jabaachuun dirqama uummata Oromoo hundaati.
Ilmaan Oromoo hojmanee diinaa afarsaa oluun akeekaafi kaayyoo diinaa milkeessuu ta’uu beekuun; Adeemsaa qabsoo jabeessuufi kaayyoo diinaa fashaleessuu, tokkummaa uummataa tiksuufi jabeessuu irraatti akka hojjettanii fi Sochii warraaqsa biyya keessa cina waan dandeessaniin akka dhaabbattan dhaamsaa isiniif dabarsina.
Waliin Ka’an Waliif Ta’an, Waliif Ta’an Biyyaaf Ta’an!!
« Jijjiirraa Tartiiba Qubee Afaan Oromoo Mootummaa Wayyaaneefi Ergamtoota Wayyaaneetiin Taasifame Ilaalchisee Dhaamsa Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO) Irraa Kenname.
Godina Wallaggaa Magaalaan Naqamtee Ifaa Dhabaa Jirti. »
Pingback: Neocolonialism fi Shira Diinaa Maqaa Qubee Afaan Oromoo Jijjiiruu jedhuun Gadi Bahee ilaalchisuun Dhaamsa Gudunfaa Dubbii. – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA
SBO: Waxabajjii 13 bara 2018. Oduu, Gaaffii fi deebii ajajaa WBO dirree Dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifame, Hundeeffama SBO Waggaa 30ffaa ilaalchisuun Qophii qindaahe fi Marii gaazexeessota Oromoo waliin Taasifame.